Amin'ny maha-Premier Stainless vy surface mpamorona ao Shina, Foshan Hermdeco Steel Co.,Ltd naorina tamin'ny 2006, izay miezaka ny Stainless vy ny fanavaozana sy ny kalitao ho an'ny mihoatra ny 10 taona. Hatreto, efa lasa ho any amin'ny malalaka Integrated orinasa ny Stainless vy ny famolavolana ara-nofo, fanodinana.
Ampio maro ny tetikasa sy ny fanaka orinasa, tetikasa in Airport, Metro sy Building Architecture, Stainless vy mpametrabola ao Korea Atsimo, Thailand, Vietnam, Indonezia, Pakistan, Bangladesh, Philippines.
Mba hihaona maro mpanjifa tinady sy ny fangatahana, ankehitriny dia hanokanantsika tena ho any amin'ny saha rehetra izay Stainless vy no ampiasaina, Stainless vy Lalàn'i Mosesy, Stainless vy vokatra & FABRICATION, anisan'izany ny fisarahana, trims, ascenseur faritra, Trolley, sns
FIDIO US NAHOANA?
- Mihoatra noho 10 taona traikefa eo amin'ny sehatra izany, dia manana matihanina & mavitrika Fanondranana ekipa.
- Ny boky ny varotra isam-bolana tonga mihoatra ny 10000 taonina, ary ny vokatra no tena malaza ao an-trano sy any ivelany, toa an'i Afovoany Atsinanana, Azia Atsimo-Atsinanana sy Afrika, etc.
- Ny fitaovana sy vaovao nandroso ny teknolojia, dia tsara izahay fantatra ho toy ny modely orinasa noho ny tsara kalitao Standard.
- Vita rafitra fanaraha-maso ny kalitao, rehefa avy-fivarotana fanohanana sy fanompoana.
- namboarina nanontany foana nandray! Levitra azo nalefa ny fangatahana!